Inqwelo moya yabakhweli eIndonesia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Inqwelo moya yabakhweli eIndonesia
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Abakhweli abangama-62 kunye nabasebenzi kucingelwa ukuba baswelekile emva kokuba inqwelomoya yeSriwijaya # # SJ182 i-737-500 (inqwelo moya encinci yomzimba omncinci) inyamalale ngenqwelomoya yasekhaya ngoMgqibelo emva kwemini. Inqwelomoya yalahleka ngaphezulu kweenyawo ezili-10,000 60 kwimizuzwana engaphantsi kwe-XNUMX kwaye inkunkuma ifunyenwe kuloo ndawo.
ISriwijaya Ukuhamba ngenqwelomoya # SJ182 Ngama-737-500 (inqwelo moya yenqwelomoya encinci) - inqwelomoya ekuthethwa ngayo ineminyaka engama-26 ubudala. I-airline yayinesiqinisekiso esiphezulu sezokhuseleko e-Indonesia
Isithethi soMphathiswa Wezothutho e-Indonesia u-Adita Irawati uthe iBoeing 737-500 isuke eJakarta malunga no-1: 56 emva kwemini kwaye yaphulukana nokunxibelelana nenqaba yolawulo ngo-2: 40 ntambama
Inqwelomoya yalahleka ngaphezulu kweenyawo ezili-10,000 zokuphakama kwimizuzwana engaphantsi kwe-60, ngokweFlightradar24
Inqwelomoya yabakhweli yomoya eSriwijaya ethwele abantu abangama-62 baphulukana nokunxibelelana nabalawuli bezithuthi zomoya emva kokuhamba kwikomkhulu lase-Indonesia ngoMgqibelo ngenqwelomoya wasekhaya.
Ingxelo ekhutshwe yinkampani yenqwelomoya yathi inqwelomoya yayihamba ngenqwelomoya kwimizuzu engama-90 ukusuka eJakarta isiya ePontianak, ikomkhulu lephondo laseNtshona Kalimantan kwisiqithi sase-Borneo e-Indonesia. Kwakukho abakhweli abangama-56 kunye nabasebenzi abathandathu ababekhwele.
Kufunyenwe inkunkuma kwindawo apho kukhangelwa kunye nokuhlangulwa kweenqwelomoya zeSriwijaya Air SJ182, kodwa akukho siqinisekiso sokuba bakwiinqwelomoya zeBoeing 737.
Ikhomishini yokhuseleko kwezokuhamba ngenqwelomoya kweli lizwe ithi ilumkile kwaye umphathiswa wezothutho wayesendleleni eya kwisikhululo senqwelomoya eJakarta. Iinqanawa zokujikeleza zabonwa emanzini emantla ntshona eJakarta apho kwagqityelwa ukubonwa inqwelomoya, itsho iArhente yoPhando kunye noHlangulo yeSizwe yaseIndonesia.
ISriwijaya Air Inqwelomoya yenqwelomoya yaseIndonesia eseJakarta kunye nekomkhulu layo eliseSoekarno-Hatta International Airport kwindawo eyi-M1 eTangerang, kufutshane naseJakarta.
Ngo-2007, iSriwijaya Air yafumana iMbasa yeBoeing yaMazwe ngaMazwe yoKhuseleko kunye nokuGcina inqwelomoya, eyanikwa emva kokuphumelela kuvavanyo olwenziwe kwiinyanga ezimbalwa. Kwakuloo nyaka mnye iSriwijaya Air yafumana iBhaso lokuDibana kwabaThengi ngeeNqwelo moya ePertamina. Ngo-2008, iSriwijaya Air yanikezelwa ngebhaso nguMarkplus & Co, ebonisa ukwazisa esidlangalaleni ngeenkonzo ezinikezelwa yiSriwijaya Air. Nge-Agasti ka-2015, iSriwijaya Air ikwafumene isiQinisekiso seBARS (isiQinisekiso soMngcipheko esiSisiseko seNdiza) esikhutshwe yiFlight Safety Foundation. I-ANI (iAero Nusantara Indonesia), iAiRod Sdn Bhd kunye neGaruda Indonesia Indawo yokugcina izinto (GMF AeroAsia).
ISriwijaya Air lelona lizwe liphethe ilizwe lesithathu ngobukhulu, lihamba ngenqwelomoya, kwaye linikezela ngeenqwelomoya kwiindawo ezahlukeneyo zaseIndonesia nakwamanye amazwe. I-airline ibhalwe njengeCandelo 1 le-airline yi-Indonesia Aviation Authority, elona nqanaba liphezulu elinokufezekiswa kukhuseleko lokusebenza.
Ngo-2003, iSriwijaya Air yasekwa nguChandra Lie, uHendry Lie, uAndi Halim noFandy Lingga, owathiya igama lakhe emva kobukhosi beSrivijaya. Kwakuloo nyaka, nge-28 ka-Epreli, yafumana ilayisensi yayo yeshishini, ngelixa i-AOC (isiQinisekiso soMqhubi woMoya) yakhutshwa kamva kulo nyaka nge-28 ka-Okthobha. Ukuqala kokusebenza nge-10 kaNovemba ka-2003, inqwelo moya yazisa ngokusesikweni iinqwelomoya phakathi kweJakarta nePangkal Pinang, ngaphambi kokungenisa iindlela ezintsha ezinje ngeJakarta-Pontianak kunye neJakarta-Palembang. Kunyaka wayo wokuqala, iSriwijaya Air yafumana ukukhula okukhawulezileyo, kwaye ngoJuni 2009, iSriwijaya Air yayisebenza ngeenqwelo moya ezingama-23, isebenza ngaphezulu kwama-33 asekhaya kunye neendlela ezi-2 zamanye amazwe.
Kwi-Paris Air Show ka-2011, iSriwijaya Air yavuma ukuthenga ii-jet ezingama-20 ezingama-Embraer, ngamalungelo okuthenga ali-190 ngaphezulu. Nangona kunjalo, inqwelomoya yarhoxisa isicwangciso sayo sokusebenzisa i-Embraer 10 kungekudala emva koko, endaweni yoko yathatha isigqibo sokusebenzisa inqwelomoya engama-190 esele inayo.
Ngo-2011, i-airline yaqala ukuqeshisa i-Boeing 12-737 yesibini ngesandla se-Boeing 500-84 ngexabiso elipheleleyo le- $ 737 yezigidi ukubuyisela inqwelomoya yayo egugileyo yeBoeing 200-2011, ngokuhanjiswa phakathi kuka-Epreli noDisemba ngo-XNUMX.
Okwangoku iSriwijaya Air iqhubeka ngokuthatha umhlala-phantsi kuyo yonke i-737 Classic fleet kunye neBoeing 737-800. Kuthathe ukuhanjiswa kweenqwelo moya ezi-2 ngo-2014, ezingama-6 737-800 ngowama-2015 kwaye ziceba ukufumana ukuya kuthi ga kwiinqwelomoya ezili-10 ngo-2016. EParis Airshow ngo-2015, iSriwijaya Air ikwasayine iodolo yeeyunithi ezi-2 ezingama-737-900ER ezinokuthenga fumana ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezingama-20 zeBoeing 737 MAX. Esi sivumelwano ibikokokuqala ukuba iSriwijaya Air ithathe inqwelomoya entsha emva kweminyaka ephantse ibe li-12 isebenza eIndonesia. Kuthathe ukuhanjiswa kweBoeing 737-900ER yayo yokuqala neyesibini ngomhla we-23 Agasti 2015.
Ukusukela nge-Novemba ka-2015 (ye-NAM Air ukusukela oko yenziwa ngo-2013), i-Sriwijaya Air kunye ne-NAM Air kuphela kweenqwelo moya e-Indonesia ezivumela ababhinqileyo ukuba banxibe i-hijab kuzo zonke iinqwelomoya, kwaye ziphakathi kweenqwelo moya e-Southeast Asia evumela ecaleni kweRoyal Brunei Airlines kunye neRayani Air. Ezinye iinqwelomoya eIndonesia zaziwa kuphela ukubavumela ababhinqileyo ukuba basebenzise i-hijab xa besebenzisa iinqwelomoya zeHajj / Umra okanye iinqwelomoya eziya eMiddle East ngakumbi eSaudi Arabia.
Ngo-Novemba u-2018, iGaruda Indonesia ngecandelo layo iCitilink yathatha imisebenzi kunye nolawulo lwezezimali zeSriwijaya Air ngesivumelwano sentsebenziswano (KSO).
Nge-8 kaNovemba, i-2019. Isivumelwano sokuBambisana (i-KSO) phakathi kweGaruda Indonesia kunye neSriwijaya Air yapheliswa, ephawulwe ngokuqala kwakhona kwezixhobo zenkonzo yomhlaba yaseSriwijaya eyayigcinwe ekuqaleni ngelixa isiVumelwano seNtsebenziswano (KSO) sasiqhubeka. Kungenxa yokuba i-PT. GMF Aero Asia .Tbk kunye ne-PT. IGapura Indonesia. I-Tbk njengenkxaso-mali evela eGaruda Indonesia Grup ngokudibeneyo iyeke ukubonelela ngeenkonzo kubagibeli boMoya baseSriwijaya kwaye yabangela ulibaziseko olwahlukeneyo kunye nabakhweli abalahliweyo kuba iSriwijaya Group khange ihlawule ngemali kwiGaruda Indonesia Group ukulungiselela ulungiselelo lwenkonzo.
Namhlanje, iSriwijaya Air yahlulwe njengenqwelo moya yeeNkonzo eziPhakathi esebenza ngokulula okulula. ISriwijaya Air yayicwangcise ukwandisa ibe yinkonzo yeenqwelo moya epheleleyo, ekufuneka ubuncinci zibe neenqwelo moya ezingama-31 ezinezihlalo zeklasi yeshishini kunye nokutya kwabakhweli. Nangona kunjalo, ngo-2015, i-airline ayikafezekisi injongo yayo